ဂျူဗင်တပ်စ် ကစားသမား နှစ်ဦးကို ကမ်းလှမ်းမယ့် ဒေါ့မွန် အသင်းနဲ့အတူ အခြားသော မနက်ခင်းသတင်းတိုများ …. – Myan Ball
ဂျူဗင်တပ်စ် ကစားသမား နှစ်ဦးကို ကမ်းလှမ်းမယ့် ဒေါ့မွန် အသင်းနဲ့အတူ အခြားသော မနက်ခင်းသတင်းတိုများ ….
၁။ မိုချန်ဂလာဘတ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့ ဆွန်မား
ဂျာမန် ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ကလပ် မိုချန်ဂလာဘတ် အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဂိုးသမားဖြစ်သူ ဆွန်မားနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပါပြီ။ စာချုပ်သစ် အရ အဆိုပါ ဂိုးသမားဟာ အသင်းနဲ့ (၂၀၂၃) ခုနှစ် အထိ ဆက်ရှိနေတော့မှာပါ။
၂။ အာဆင်နယ် နည်းပြရာထူးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို ငြင်းဆန် လိုက်တဲ့ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာ
လက်စတာ နည်းပြ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာက အာဆင်နယ် နည်းပြသစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် ကိုယ်တိုင် ငြင်းဆန်သွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့် (၂) နေရာမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ လက်စတာအသင်းနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ စီမံကိန်းတွေအပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်ထားတယ်လို့လည်း ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာက ဆိုခဲ့တာပါ။
၃။ ကိုလာရော့ဗ်ကို ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ဖီနာဘာချီ
တူရကီ ကလပ် ဖီနာဘာချီအသင်းဟာ ရိုးမားအသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ကိုလာရော့ဗ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူဟောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ကိုလာရော့ဗ်ဟာ လာမယ့် ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ အသင်းက ထွက်ခွာဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါ။
၄။ အသင်းရဲ့ ကြယ်ပွင့်ကို အငှားချမှာ မဟုတ်တဲ့ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်
ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဘရာဇီး ကြယ်ပွင့် ကစားသမားလေး ဗီနီစီယက်စ်ကို လာမယ့် ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ အငှားချသွားဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို နည်းပြ ဇီဒန်းကိုယ်တိုင်က အတည်ပြုပေးခဲ့တာပါ။
၅။ ရစ်ချာလီဆန်ကို ကာလရှည် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့တဲ့ အဲဗာတန်
အဲဗာတန် အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ရစ်ချာလီဆန်ကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းကို အဲဗာတန် အသင်းရဲ့ တရားဝင် တွစ်တာအကောင့်မှ တစ်ဆင့် အတည်ပြုခဲ့ပြီး ရစ်ချာလီဆန် တစ်ယောက် အဲဗာတန် အသင်းမှာ ကာလရှည် ဆက်ရှိနေတော့မှာပါ။
၆။ မန်ဇူကစ်ကို စိတ်မဝင်စားတော့တဲ့ ယူနိုက်တက်
ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး မန်ဇူကစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ယူနိုက်တက်အသင်းက စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒီကစားသမားကို ခေါ်ယူဖို့ ယူနိုက်တက်အသင်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးပြီး ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း ယူနိုက်တက်ကို လာဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ယူနိုက်တက်အသင်းဘက်က ကစားသမားကို စိတ်မဝင်စားတော့တာပါ။
၇။ နောက်ထပ် (၂) ပွဲ အခွင့်အရေးရမယ့် ပယ်လီဂရီနီ
ဝက်စ်ဟမ်းအသင်း နည်းပြ ပယ်လီဂရီနီဟာ သူ့ရဲ့ ရာထူး ဆက်လက် တည်မြဲဖို့အတွက် နောက်ထပ် ပွဲစဉ် (၂) ပွဲ အခွင့်အရေးရမှာပါ။ အဆိုပါ မန်စီးတီး နည်းပြဟောင်းဟာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ ကာလရှည် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးမှုကြောင့် ဖိအားတွေအောက် ရောက်ရှိနေတဲ့ နည်းပြ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၈။ အမ်မရီကန်နဲ့ မန်ဇူကစ်တို့ကို ကမ်းလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဒေါ့မွန်
ဒေ့ါမွန်အသင်းဟာ အီတလီ စီးရီးအေ ကလပ် ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး မန်ဇူကစ် နဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား အမ်မရီကန်တို့ကို ကမ်းလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ အဆိုပါ ကစားသမား နှစ်ယောက်လုံးဟာ လာမယ့် ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းကို စွန့်ခွာဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီး ဒေါ့မွန် အသင်းဘက်က အခုလိုပဲ ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါ။
အချိန်မလေးစားတဲ့ ဆန်ချိုကို ဇန်နဝါရီလမှာ ဒေါ့မွန် ထုတ်ရောင်းမယ်လို့ သတင်းထွက်
လီဗာပူးကို ဖိအားပေးရမယ့် မန်စီးတီးတို့ နိုင်ပွဲဆက်လက်ရှာဖွေနိုင်မှာလား ???